Mediam-bahoaka 30 Jona 2013
#SafeCityPledge: Nijoro Hiaro Ny Vehivavy Aty Anaty Aterineto Ny Indiana
Azia Atsimo 27 Jona 2013
Nisy fanentanana nanerana ireo tambajotra sosialy Indiana tao amin'ny Twitter niaraka tamin'ny fanomezan-toky avy amin'ny tsirairay fa hiady amin'ny fanolanana sy ny fanabantiana vehivavy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Jona 2013
Navoakan'ny Global Voices ny ampahany amin'ny bilaogin'i Sabline Blanc sy Ophélia Noor : “Les hackers dans la cité arabe” noho ny fahitàna ny ataon'ireo mpanao aterineto any Afovoany Atsinanana sy any Afrika Avaratra. Ankehitriny hitany ny tontolon'ny aterineto any Alzeria niaraka tamin'ny tanora geek roa avy ao amin'ny Fianarana ambony momba ny Informatikan'i Alger.
Tiorkia 06 Jona 2013
Novangian'ny matoatoa Istambul, tanàna lehibe any Torkia, noho ny herisetra niseho tao tamin'ny 1 May 2013 taorian'ny telo taona nankalazana ny Fetin'ny Asa tamim-pilaminana teo amin'ny kianjan'i Taksim. Voafetran'ny fanamboarana ilay toerana sy ny fepetra noraisin'ny mpitantana ny tanàna dia nanjary tany fiadiana ilay tanàn-dehibe misy mponina 15 tapitrisa ary nanimba zavatra sy nandratra olona maro
Afrika Mainty 02 Jona 2013